भिक्टर ह्युगो - विकिपिडिया
(१८०२-०२-२६)२६ फेब्रुअरी १८०२
२२ मे १८८५(१८८५-०५-२२) (८३ वर्ष)
उपन्यास, नाटक, कविता, निबन्ध, चित्रकला
१८२९ - १८८३
; मृत्यु सम्म
भिक्टर म्यारी ह्युगो (२६ फेब्रुअरी १८०२ – २२ मे १९८५) फ्रान्सेली कवि, उपन्यासकार र नाटककार थिए । उनी फ्रान्सेली लेखकहरु मध्येका महान् मानिन्छन् । उनका ले कोतँप्लाँसो र ला लजों दे सिएसस् कविता सङ्ग्रह उच्च स्तरका मानिन्छन् । फ्रान्स बाहिर उनको ले मिजरबेल र नोथ्र देम दे पेरिस उपन्यास चर्चित छन् । उनका ४००० भन्दा बढी कोरिएका चित्रहरू राम्रा मानिन्छन् । उनी "मृत्यु दण्ड" हटाउन मदत गर्ने एक अभियन्ता मानिन्छन् । उनका कला-कृतिहरूले उनको समयको राजनीतिक र सामाजिक विषयहरूलाई छोएका छन् । उनको सम्मानमा फ्रान्सेली मुद्रामा उनको तस्बिर राखिएको छ ।
ह्युगो जोसेफ दम्पतीको तेस्रो छोराका रूपमा सन् १८०२ मा जन्मिए । बाबू जोसेफ लियोपोल्ड नेपोलियन पक्षधरका थिए भने आमा सोफि क्याथोलिक थिइन् । ह्युगोको बाल्यकाल फ्रान्सको राजनीतिक उथलपुथलमा रह्यो, ह्युगो जन्मेको २ वर्षपछि नेपोलियन फ्रान्सको शासक बने । पछि ह्युगो तेह्र वर्षको हुदाँ बोर्बन साम्राज्य पुन: फर्कियो । ह्युगोको बाबू जोसेफ नेपोलियनको सैन्य पदाधिकारी हुनाले ह्युगोले विभिन्न ठाउँहरू घुम्न पाए । बाल्यकालमा ह्युगोले नेप्लस्, मेडिटेरिनियन र रोमहरू घुम्ने अवसर पाए ।
ह्युगोका आमा सोफिले सुरुमा बाबू जोसेफलाई नै इट्लीसम्म पछ्याए जहाँ जोसेफ तीन स्पेनी प्रान्तहरूको गभर्नर बने । सैन्य-जीवन र क्याथोलिक विश्वासरहित हुनाले सोफि पेरिसमा आफ्ना श्रीमानबाट केही समय छुट्टिएर आफ्नो बच्चाहरू बसिन् । यस स्वरुप ह्युगोको सुरुका रचनाहरूमा राजा र विश्वासका भावनाहरू झल्किन्छन् । सन् १८४८ पछि मात्र उनका रचनाहरूमा क्याथोलिक राज्य विरोधी र स्वतन्त्र हुनुपर्ने भावहरू पाइन्छन् ।
भिक्टर आफ्नो बाल्यकालकी साथी एड्ली फुचरसँग प्रेममा परे, जुन आमा सोफिको इच्छा विपरित थियो । सन् १८२२ मा आमा सोफिको मृत्यु पछि मात्र ह्युगोले एड्लीसँग विवाह गरिन् । उनीहरूको पहिलो सन्तानको सानैमा मृत्यु भयो । दोस्रो सन्तान लियोपोल्डिन २८ अगस्ट १८२४ मा जन्मिए, चार्लस ४ नोभेम्बर १८२६ मा, फ्रान्स्वाँ २८ अक्टोबर १८२८ मा र कान्छी सन्तान २४ अगस्ट १८३० मा भयो ।
ह्युगोको जेठी र प्यारी सन्तान लियोपिडिनको, विवाह पछि सन् १८४३ मा, उन्नाइस वर्षको उमेरमा मृत्यु भयो । ४ सेप्टेम्बर १८४३ मा उनी ढुङ्गा दुर्घटनामा परिन् । ह्युगो यश समय दक्षिण फ्रान्समा थिए र आफ्नी छोरीको मृत्यु पत्रिकाबाट मात्र थाहा पाए ।
उनले आफ्नो वेदना, चर्चित बन्न सफल कवितामा, À Villequier यसरी व्यक्त गरे:
हाय! पुर्याउँदा इर्ष्यापूर्ण आखाँहरू बितेको समयमा,
ढाढस दिन केही सक्दैनन् यस धरणीमा,
म जीवनका बितेका समय पछ्याउँछु,
जब म उनलाई पखेटा खोली टाढा
उड्दैँ गरेको देख्छु!
म तुरुन्त नमरुन्जेल देखिरहनेछु,
तुरुन्त कि — यति धेरै आँसुहरू!
जब म पिडामा कराउनेछु: " सन्तान मेरो जो
हँ! अब ऊ मसित रहिन!"
नेपोलियन तेस्रोको सन् १८५१ को कु पछि ह्युगोले फ्रान्स छाडी ब्रसेल्स, चेनल आइल्यान्स, जर्जी र गुरनसी मा जीवन बिताए । सन् १८७३ पछि मात्र ह्युगो फ्रान्स फर्किए ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=भिक्टर_ह्युगो&oldid=924767" बाट अनुप्रेषित